झाँक्री बल्ल आइन् लाइनमा, केपी ओलीलाई सम्झिएर धरधरी रोइन् ! - nepal day
झाँक्री बल्ल आइन् लाइनमा, केपी ओलीलाई सम्झिएर धरधरी रोइन् !
प्रकासन मिति : १७ पुष २०७८, शनिबार १५:१३
१६ पुस, गुल्मी । शहरी विकासमन्त्री तथा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्री बल्ल आएकी छन् । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सम्झेर भक्कानिएर रुन थालेकी हुन् ।
एमालेलाई धेरैले केपी ओली पर्यायको रुपमा समेत व्यंग गर्ने गर्छन् । झाक्री रोएपछि धेरैले ओलीलाई सम्झिएर झाक्री रोएको टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् । झाक्री राजनीतिक जीवनको कठिनपूर्ण यात्रा सम्झिँदै रोएकी छिन् ।
‘धेरै मान्छेले पार्टी कसरी निर्माण गर्छौ, राजनीति यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्,’ मन्त्री झाँक्रीले गहभरि आँशु झार्दै भनिन् ।
मन्त्री झाँक्रीले निर्वाचन भए नेकपा एमाले पत्तासाप हुने बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन नै नचाहेको र अबको निर्वाचनमा एमाले पत्तासाप हुने बताइन् ।
सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडाले एमाले अत्तालिएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले जनताको समस्या बोल्ने र समाधान गर्ने थलो संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले निरंकुश पारा देखाएको बताइन् ।
जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने थलोलाई बन्धक बनाउनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । संसदलाई बन्धक बनाइ राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको समस्या समाधान तर्फ लाग्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री झाँक्रीले सुझाव दिइन् ।